Mayelana NATHI - imikhiqizo ye-Ningbo Haishu Judin Packing Co, Ltd.
KusungulweNgo-2009, uJudin Pack Group ungumkhiqizi okhethekile wezinkomishi zokudla ezilahlayo neziqukathi, eziku-Ningbo City, idolobha elingumngcwabo odumile, sijabulela ezokuhamba ezifinyeleleka kalula, ezisilethele amathuba amaningi nezinzuzo zokuncintisana ezimakethe zamazwe aphesheya. Le nkampani ihlangabezane nethimba lenkonzo yokuhweba ngakwamanye amazwe kanye nesipiliyoni sokuphatha, njengoba ukusebenza kwale nkampani kuletha amandla amakhulu.
Ukuba yingcweti ekwakheni, ekwakheni nasekhiqizeni izinkomishi namabhokisi, uJudin Pack unezisebenzi ezingaphezu kwamashumi ayisithupha ezinamakhono kakhulu, abaqambi aba-5 abakhethekile, nabaphathi abangu-10 okubandakanya abahloli bekhwalithi abangu-3, ​​nomunye umsebenzi wezobuchwepheshe cishe abantu abayi-15 abanolwazi olungaphezulu kweminyaka eyi-10, futhi abasebenzi bezobuchwepheshe abangama-25 banesipiliyoni esisebenza ngaphezulu kweminyaka engu-5. Besekelwa efektri eyi-8,000 metres fektri, umthamo wethu wokukhiqiza ufinyelela ngaphezu kweziqukathi ze-HQ ezingama-50 ngenyanga. Ngocwaningo oluqinile nekhono lentuthuko kanye nezisombululo zokuhlanganisa ezihlanganayo, sanelisa izidingo zamakhasimende ethu ngempumelelo kusuka kuwo wonke umhlaba ngemikhiqizo emisha unyaka nonyaka. Ukuthembela kumiklamo ephelele, izinhlobonhlobo eziningi, ikhwalithi enkulu, amanani anengqondo, insizakalo enhle nokuthumela okufika ngesikhathi, imikhiqizo yethu ithengisa kahle ezimakethe zaseMelika, zaseYurophu nase-Asia.
Inkampani yethu inesipiliyoni seminyaka eyishumi nanye ekufakweni kwemikhiqizo ephepheni. Sinikezela ngempahla kumabhizinisi amaningi owaziwayo, njenge-birgma eSweden, Carrefour eSpain naseFrance, kanye noLidl eJalimane.
Sinomshini wokuphrinta osebenzayo futhi osezingeni eliphakeme-i-Heidelberg, unganikela ngokushicilela kwe-flexo, ukuphrinta kwe-offset, kanye nefilimu ye-PET emnyama, ukugxila kwegolide nobunye ubuchwepheshe. Inkampani yethu iye yaqinisekiswa isitifiketi se-EUTR, TUV ne-FSC. Imikhiqizo eyenziwe ngaphansi kokuqashwa kwabaqondisi abaqeqeshiwe kakhulu, abahloli abajwayelekile nabanolwazi.
Ukulandela umgomo we- " Ubuqotho, ukuzibophezela, ukusebenzisana, ukusungula izinto ezintsha", UJudin Pack manje ubheke phambili ekubambisaneni okukhulu kakhulu nawo wonke amakhasimende ngokuya ngezinzuzo zombili. Sicela uzizwe ukhululekile ukuxhumana nathi noma vakashela ifektri yethu ukuthola eminye imininingwane.